State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi attends ASEAN-ROK Commemorative Summit and 1st Mekong-ROK Summit – Ministry of Foreign Affairs
Myanmar and the Republic of Korea sign Memoranda of Understanding on Cooperation in the fields of Fisheries, Technical and Vocational Training, and Environment.
The Myanmar delegation led by Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar, arrived back Nay Pyi Taw today evening after attending the ASEAN-ROK Commemorative Summit and 1st Mekong-ROK Summit held in Busan, the Republic of Korea from 25 to 27 November 2019.
On 25 November 2019, the State Counsellor attended opening ceremonies of the ASEAN-ROK CEO Summit and ASEAN-ROK Culture Innovation Summit which were held at the Exhibition Centre II, BEXCO. Then, the State Counsellor deliveredakeynote speech at the ASEAN-ROK Culture Innovation Summit under the theme “Growing with Art”. In the afternoon, the State Counsellor held roundtable talk with the Korean Students studying Myanmar Language from the Busan University of Foreign Studies and Myanmar Students from the Pukyong National University.
Later in the afternoon, the State Counsellor deliveredakeynote speech at the ASEAN-ROK CEO Summit under the theme “New Partnership for Co-Prosperity of Korea and ASEAN Businesses”. In the evening, the State Counsellor attended Welcoming Dinner of the ASEAN-ROK Commemorative Summit hosted by Mr. Moon Jae-in, President of the Republic of Korea. On 26 November 2019, the State Counsellor attended the ASEAN-ROK Commemorative Summit. At the Summit, the Leaders reviewed the ASEAN-ROK cooperation for the past 30 years and discussed its future direction to strengthen ASEAN-ROK Dialogue Relations. The Leaders also exchanged views on matters relating to enhancing connectivity towards prosperity and sustainability. Then, the State Counsellor attended the ASEAN-ROK Startup Summit and toured Innovation Showcase 2019.
Afterward, the State Counsellor attended the Leaders’ Retreat Luncheon on Advancing Peace and Prosperity on the Korean Peninsula at the Nurimaru APEC House.
In the afternoon, the State Counsellor heldabilateral meeting with President Moon Jae-in at the Westin-Chosun Hotel. At the meeting, the Leaders cordially discussed matters pertaining to the consolidation of the existing traditional friendly relations, progress on the implementation of matters agreed by both sides during the recent state visit of President Moon Jae-in to Myanmar, strengthening of mutually beneficial cooperation, particularly in the fields of culture, education, agriculture, fisheries, environment, infrastructure and rural development as well as fostering people-to-people contacts. They also discussed possible recruitment of more workers from Myanmar under the Employment Permit System(EPS) of the Republic of Korea, cooperation between Myanmar youth enthusiasts of Korean Culture and the K-Wave Academy and the launching of solar power station in Mann Aung, Rakhine State.
Subsequently, the two Leaders witnessed the signing of the Memoranda of Understanding between the two Countries namely “Cooperation in Fisheries”, “Cooperation in the Field of Technical and Vocational Education and Training” and “Comprehensive Environmental Cooperation”.
Then, the State Counsellor visited the ASEAN Culture House and toured the exhibitions of Cambodia, Laos, Myanmar, Viet Nam and Thailand. Later in the evening, the State Counsellor attended Mekong-ROK Welcoming Dinner.
On 27 November 2019, the State Counsellor attended the 1st Mekong-ROK Summit where the Leaders discussed and exchanged views on Mekong-ROK future cooperation for co-prosperity. Then, the State Counsellor viewed the Special Exhibition on Biodiversity Cooperation between Mekong Countries and the ROK.
In the afternoon, the State Counsellor met with Myanmar nationals residing in the Republic of Korea at the Sasang District Town Hall and responded to the queries raised by Myanmar workers.
A member of the Myanmar Delegation and Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin attended the “2019 International Development Cooperation Day in Korea” on 25 November 2019. During the Ceremony, the Foreign Minister of the Republic of Korea and the Ministers representing Cambodia, Laos PDR, Myanmar, Viet Nam and the Philippines signed the “Memorandum of Understanding on Development Cooperation”. Under the MOU, the ROK and the five ASEAN Member States will strengthen cooperation in the areas of digital economy, higher education, eliminating explosive remnants of war, smart city, and connectivity. The Union Minister also participated asapanelist at the panel discussion of the International Development Cooperation Day under the theme “Development Cooperation towards People-centred ODA”.
At the end of the ASEAN-ROK Commemorative Summit and 1st Mekong-ROK Summit, the “ASEAN-ROK Joint Vision Statement for Peace, Prosperity and Partnership”, “Co-Chairs’ Statement on the ASEAN-ROK Commemorative Summit” and “Mekong-Han River Declaration” were issued.
During the visit, the State Counsellor was accompanied by Union Minister for Union Government Office, U Min Thu, Union Minister for Agriculture, Livestock and Irrigation Dr. Aung Thu, Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin and responsible officials.
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အာဆီယံ-ကိုရီးယား ဆွေးနွေးဖက်ဆက်ဆံရေး အထိမ်းအမှတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ပထမအကြိမ် မဲခေါင်-ကိုရီးယား ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့တက်ရောက်ခဲ့
မြန်မာနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတို့အကြား ရေလုပ်ငန်း၊ နည်းပညာနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်မည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာများ လက်မှတ်ရေးထိုး
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ခေါင်းဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ဘူဆန်မြို့၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့မှ ၂၇ ရက်နေ့အထိကျင်းပသည့် အာဆီယံ-ကိုရီးယား ဆွေးနွေး ဖက်ဆက်ဆံရေး အထိမ်းအမှတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ပထမအကြိမ် မဲခေါင်-ကိုရီးယား ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတို့သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် နေပြည်တော်သို့ ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် Exhibition Centre II, BEXCO ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ASEAN-ROK CEO Summit ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ASEAN-ROK Culture Innovation Summit ဖွင့်ပွဲအခမ်းအအနားသို့ တက်ရောက်ပြီး “Growing with Art” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့သည်။ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ဘူဆန်နိုင်ငံခြား ဘာသာသင်တက္ကသိုလ်၌ မြန်မာဘာသာအထူးပြုသင်ယူနေကြသည့် ကိုရီးယားကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့် ဘူဂယောင်း အမျိုးသားတက္ကသိုလ်၌ ပညာဆည်းပူးနေကြသော မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့်တွေ့ဆုံကာ စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခဲ့သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် Exhibition Centre II, BEXCO ၌ ကျင်းပသည့် ASEAN-ROK CEO Summit တွင် “ New Partnership for Co-Prosperity of Korea and ASEAN Businesses” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပြောကြားပြီး၊ ညနေပိုင်းတွင် Cruise Grand Ballroom, Hilton Busan ၌ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ မွန်ဂျေအင်းက အာဆီယံ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအား တည်ခင်းသည့် ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် အာဆီယံ-ကိုရီးယား ဆွေးနွေးဖက်ဆက်ဆံရေး အထိမ်းအမှတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ခေါင်းဆောင်များက ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကာလအတွင်း အာဆီယံနှင့် ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံတို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး နောက် အနာဂတ်တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်နိုင်မည့် အလားအလာများကိုလည်းကောင်း၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် သာယာဝပြောရေးတို့အတွက် ပေါင်းစည်းဆက်သွယ်မှု ပိုမိုတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိုလည်းကောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်သည် ASEAN-ROK Startup Summit သို့ တက်ရောက်ပြီး၊ Innovation Showcase 2019 ကို လှည့်လည် ကြည့်ရှုသည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် Nurimaru APEC House တွင် ကျင်းပသော ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် သာယာဝပြောရေးကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးသည့် ခေါင်းဆောင်များ၏ သီးသန့်နေလယ်စာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် Westin-Chosun ဟိုတယ်၌ သမ္မတ မစ္စတာမွန်ဂျေအင်းနှင့် နှစ်နိုင်ငံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယင်းသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာစေရေး၊ မကြာသေးမီက မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့သည့် သမ္မတ မစ္စတာမွန်ဂျေအင်း ၏ ခရီးစဉ်အတွင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား သဘောတူညီခဲ့ သောကိစ္စရပ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှု အခြေအနေများ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေလုပ်ငန်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍများအပါအဝင် နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားရေးနှင့် ပြည်သူအချင်းချင်း ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု ပိုမိုတိုးတက် ခိုင်မာစေရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် ကိုရီးယား EPS စနစ်ဖြင့် မြန်မာအလုပ်သမားများ ပိုမိုတိုးမြှင့်ခေါ်ယူရေး၊ ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုကို စိတ်ဝင်စားသူ မြန်မာလူငယ်များအား K-Wave Academyမှ ကူညီပံ့ပိုးပေးရေးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မာန်အောင်ကျွန်းတွင် နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်သုံးဓါတ်အားပေးစက်ရုံး ဖွင့်လှစ်ရေးကိစ္စရပ်များကိုလည်း ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် သမ္မတ မစ္စတာ မွန်ဂျေအင်းနှင့်အတူ နှစ်နိုင်ငံအကြား “ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ”၊ “နည်းပညာနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ” နှင့် “ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍတွင် ဘက်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ” များ လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ASEAN Culture House သို့ သွားရောက်၍ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့၏ ပြခန်းများကို လေ့လာကြည့်ရှုပြီးနောက် ညနေပိုင်းတွင် မဲခေါင်-ကိုရီးယားထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ ကြိုဆို ဂုဏ်ပြု ညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ပထမ အကြိမ် မဲခေါင်-ကိုရီးယား ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် ခေါင်းဆောင်များက အတူတစ်ကွ သာယာဝပြောရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မဲခေါင်နိုင်ငံများနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတို့အကြား ပူးပေါင်း ဆောင်မှုတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် မဲခေါင်နိုင်ငံများနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့၏ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အထူးပြပွဲသို့ လေ့လာကြည့်ရှုသည်။ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေကြသော မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် စာစန်းခရိုင်ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံကာ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီး မြန်မာအလုပ်သမားများ၏ မေးမြန်းချက်မျးကို ဖြေကြားပေးခဲ့သည်။
မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လိုက်ပါခဲ့သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဉီးကျော်တင်သည် နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် “ကိုရီးယား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနေ့(၂၀၁၉)” အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အခမ်းအနားတွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့အကြား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ (Memorandum of Understanding on Development Cooperation)ကို ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ (၅)နိုင်ငံတို့မှ တက်ရောက်လာကြသောဝန်ကြီးများက လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံနှင့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် (၅)နိုင်ငံတို့သည် အဆိုပါနားလည်မှုစာချွန်လွှာမှတစ်ဆင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးကဏ္ဍ၊ အဆင့်မြင့် ပညာရေးကဏ္ဍ၊ စစ်ပွဲများမှ ကျန်ရှိခဲ့သည့် ပေါက်ကွဲစေနိုင်သောပစ္စည်းများ ရှင်းလင်းရေးကဏ္ဍ၊ အဆင့်မြင့် မြို့တော်များတည်ဆောက်ရေးကဏ္ဍနှင့် ဒေသတွင်း ပေါင်းစပ်ဆက်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေးကဏ္ဍတို့တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အခမ်းအနားတွင် “ပြည်သူကို ဗဟိုပြုသည့် ပြည်ပဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်သည့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဆွေးနွေးသူအဖြစ် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
အာဆီယံ-ကိုရီးယား ဆွေးနွေးဖက်ဆက်ဆံရေး အထိမ်းအမှတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ပထမအကြိမ် မဲခေါင်-ကိုရီးယား ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတို့အပြီးတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ သာယာဝပြောရေးနှင့် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးတို့အတွက် အာဆီယံ-ကိုရီးယားပူးတွဲမျှော်မှန်းချက်ဆိုင်ရာ ကြေညာချက် (ASEAN-ROK Joint Vision Statement for Peace, Prosperity and Partnership) ၊ အာဆီယံ-ကိုရီးယားအထိမ်းအမှတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ပူးတွဲဥက္ကဌများ၏ ကြေညာချက် (Co-chairs Statement on the ASEAN-ROK Commemorative Summit) နှင့် မဲခေါင်-ဟန်မြစ်ကြေညာချက် (Mekong-Han River Declaration) တို့ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပြည်တောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဉီးမင်းသူ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်သူ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဉီးကျော်တင်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ လိုက်ပါခဲ့ကြသည်။